Ogaden News Agency (ONA) – Warsaxafadeed ka Soo Baxay Shirkii Jaaliyadaha Pacific-ga
Warsaxafadeed ka Soo Baxay Shirkii Jaaliyadaha Pacific-ga
Waxaa ka qabsoomay magaalada Melbourne 5 ilaa 6 bisha April shirkii sanadlaha ahaa ee jaaliyaadka Ogaadeeniya ee Pacific-ga. Shirka sanadkan oo ahmiyad gaar ah lahaa ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan jaaliyadaha lixda ah ee Pacific-ga. Waxaa kaloo kasoo qayb galay bulsha waynta Ogaadeeniya ee Pacific-ga ku nool, masuuliyiin ka socday JWXO oo ay ka mid ahaayeen Afhayeenka JWXO, Isu-duwaha jaaliyadaha Pacific-ga iyo xubno ka mid ah Golaha dhexe ee JWXO iyo dhamaan Hawlwadeenada jaaliyaadka Pacific-ga.
Shirka oo lagu qiimaynayay hawlaha jaaliyaadka Pacific-ga ee sanadkii tagay iyo hawlaha horyaala sanadkan ayaa waxaa ka soo baxay go’aano dhaxagal ah, waxaana la go’aansaday;
1. In si aada loo dardargaliyo hawlaha jaaliyaadka iyo waajibaadka dul saaran.
2. In la xoojiyo taageerada halganka gobonimo doonka ah ee ka socda gudaha Ogaadeeniya.
3. In laga feejignaado shirqoolada gumaysiga Itoopiya oo maciin biday borobagaada madow iyo dacaayadaha raqiiska oo uu doonayo inuu ku jaha wareeriyo bulsha waynta ogaadeeniya ee gudo iyo dibadba ah.
Wuxuu shirku baaq u dirayaa bulsha waynta caalamka meel kastoy joogaanba sida Qaramada Midoobay, Ururka Midoowga Yurub, Ururka Midowga Afrika, Ururka Jaamacada Carabta, Urur Goboleedka IGAD, iyo dawladaha Deeqda Bixiya inay wax ka qabtaan xasuuqa ba’an ee gumaysiga Itobiya uu ku hayo shacabka Ogaadeeniya iyo cuna-qabataynta saaran 10ka sano dalka Ogadenya.
Shirku wuxuu aad u bogaadinayaa N/hurayaasha CWXO ee jiida hore ku jira ee u taagan xoreynta dhulka Ogaadenya. Wuxuu kaloo shirka bogaadinayaa shacabka geesiga ah ee Somalida Ogaadenya ee adkaysiga badan una dulqaatay dhibka iyo hagardaamada gumaysigu ku iyagoo hadafkoodu yahay inay xornimo taama ku naaloodaan
Shirku wuxuu digniin culus u dirayaa shikadaha doonaya inay boobaan khayraadka dabiiciga ee Ogaadenya Eebe ku manaystay iyadoon lagala tashan dadka Ogadenya.
Mintid midnimo isku tashi
Jaaliyadaha Pacfic-ga ee Somalida Ogadenya.